Best hadiyado Christmas walaashood 2016 - Gifts Best Fikradaha Christmas
Best hadiyado Christmas walaashood:Waqtiga ugu weyn ee sannadka adiga iyo qoyskaaga waayo waa xilli Christmas. Xataa marka aad ogtahay qoyskaaga sida danbe ee gacanta u gaar ah, waxaa inta badan noqon kartaa adag tahay in la ogaado waxa si aad u hesho in iyaga tusi doonaa inta ay ka dhigan tahay in aad, ma ahan oo keliya in ka badan fasaxa, laakiin waqtiga oo dhan. walaashay A waa qof aad u dhow oo had iyo jeer ka badan saaxiib. inta badan Iyadu waa adag tahay in ay ka farxiyaan iyo tani waa sababta aad mar walba ku adag in la ogaado waxa aad u hesho walaashay for Christmas. Hoos waxaa ku taxan wejiyo, taas oo kaa caawin doona jawaabta su'aashan adag .
Waa maxay Si Hel My Sister Waayo Christmas 2017 ?
1. Salada Fashion(hadiyado Christmas walaashood)
Mid ka mid ah aan jeclaa ugu wanaagsan ee hadiyado Christmas walaashood waa tan pink qurux badan moodada wallet.When walaashiis bixio style waa soo batay shopping ah, ayay u baahan tahay meel amaan ah si iyada kaararka lacagta caddaanka ah iyo credit. Tani jeebka tavy Cedar Street qurux badan ka Kate Spade New York ku haboon doonaa iyada kiishad dhammaataan. Inkastoo ay size yar, this 100 jeebka boqolkiiba maqaar dhabta qoreysa jeebka warqada on gudaha iyo dibadda, oo lagu daray meel aan ka yarayn in sideed kaararka. jeebka Tani yimaado waa doorashooyin saddex-midab: Black / dhagax dixeed, Gold iyo koraya Snapdragon.
2. boorsadaada maradiisa (hadiyado Christmas walaashood)
Sidaas waxa haddii SIS Attam durbaba boorsada weyn? Sidee ku saabsan wax ay qaadan in? Tani boorsadaada maradiisa Rebecca Minkoff waa size ugu fiican ee 9 inches by 5 inches, oo ay suunka waxbaa laga beddeli karaa sida badan-the-garabka iskutallaabta-xabadka; oo waxa uu xitaa laga saari karaa si walaashaa u isticmaali kartaa sida xajin soo jiidasho u leh habeen xilli dambe soo baxay magaalada.
Waayo, Sister hakaga ah:
3. Yoga Sports Bag (hadiyado Christmas walaashood)
Marka walaashaada kaa hakaga qaadataa safar jimicsiga, iyada badan si ay u fuliyaan helay. Tani boorsada functional fantastic ayaa boos dhan baahida iyada, xataa derin yoga iyada! Gaar ahaan loogu talagalay by Manduka in tiraan yoga iyo pilates dunida, this Go Free 2.0 boorsada qoreysa jeebka hore zip oo habboon a 26 inch derin yoga ballaaran, muhiimka ah, card iyo telefoonka gacanta dhigan karo, iyo meel weyn oo ugu weyn ee dhalada biyaha iyada, shukumaan iyo xataa laptop ah.
4. Tennis teeniskoo(hadiyado Christmas walaashood)
Haddii walaashaa waa jiriin tennis, i qabaa mid ka mid ah hadiyado Christmas waayo, (iyada) walaashaa doonaynin be this one.In kastoo waxa la joogaa wakhtigii Christmas, waxaad yeelan doontaa Jacaylkii walaashaada kaa muddo bilo ah xagaaga marka aad iyada hadiyad this Wilson Six. Mid ka mid ah ayna miiqdaan teeniskoo tennis Saamaynta. teeniskoo ayaa ku soo beegmay in Begovic uu a, midabka casaan iyo caddaan iyo hakaga qoreysa hoos gariirka gaarka ah ee xamili. Its technology Saamaynta wareejin siinayaa this teeniskoo inches dheeraad ah oo ku saabsan maxkamada iyo ku haya dheeraad ah ee ciyaarta. stop Next aad SIS, Wimbledon!
5. harqaan(hadiyado Christmas walaashood)
Waayo, Sister khaa'inka:Haddii walaashaa waa uun sidii loo bilaabi la tolidda ama iyadu haatan gacanta duug ah, this mashiinka cajiib tolidda Brother CS6000i yeelan doonaan iyada tolo iska saacado. Tani smart tolidda mashiinka ka faanaa 60 dhisay-in laga tolay, dhowr Hababka god button, macaanka a bobbin adkaysi iyo gacan ku haynta xawaaraha variable. gacanta ayaa sidoo kale waxay leedahay qol ah accessories tolidda walaashaa oo dhan. Dhinacyada la Tilmaamo badan oo dhan, walaashaa heli kartaa mashiinka iyo goob Tolmada via bandhig computer LCD ee bogga hore ee mishiinka, oo iyana waxay xitaa tolo karaa in iftiinka tolidda dhisay-in mahad iftiinka yar yahay.
6. Sketching iyo Sawiridda Set
Kanu waa mid ka mid ah talooyin aan ugu wanaagsan ee christmas gifts for my sister:Marka male walaashaa waxaa socda duurjoogta ah fikradaha farshaxanka, ayay u baahan doontaa inaad iyaga u gal warqad u hesho sida ugu dhaqsaha badan. Ma jiro hab fudud si ay u sii sahay tahay iyada oo gacan ka badan la tamashlaynta this 134 tahay piece dhigay ka Royal & Lang Nickel. set The qalabayn doonaa walaashaa la qalin midab, ulaha dhuxusha, qalin pastel, jirrid qasayso, cajiin-awoodi tirtire iyo wax ka badan. Waxaa kaloo ka mid mannequin yar. set oo dhan imanaya saddex kiis qurux heer qoryo la xamili maqaar eegno.
Sketching iyo Sawiridda Set
7. Qiyaastii-Dhegaha Sameecadaha
Bose waa magaca ah in ay muddo dheer ahayd Lewis ugu tayada sareeya ee headphone iyo afhayeenka technology. SoundTrue Kuwani agagaarka headphones style dhegta siin doonaa walaashaada kaa jecel yahay raaxada darafkii Barkimo xumbo xusuusta halka bixinta crystal dhawaaq cad oo dabiici ah in dhegaha iyada. headset ayaa xitaa ka mid ah makarafoon dhisay-in loo isticmaalo in wicitaanada. headphones iman kiis horyalka ilaalinta iyo waxaa laga heli karaa in afar midabo casriga ah.
Waayo jeclaa Music ah:
8. Loomana baahno Electric Gitaarka
kale oo xiiso leh hadiyado Christmas walaashood the Guitar. A best seller this year, this gitaarka Jameson waa hibo kaamil ah si ay u sii arrimha dibada habaryartaa. Inkasta oo ay qaab dhaqanka gitaarka xajmi buuxa, Ma jiro wax qadiimka ah oo ku saabsan gitaarka this ay dhameystaan ​​dilaaca buluug madow, dhisay-in barbareysay iyo design dhuuban-line at kaliya saddex inches qabaa. Thanks to pickups ay dhisay-in, aad oo dabaaldegaya’ SIS cayaaraa shidan karaa ama si buuxda u baahno.
Loomana baahno Electric Gitaarka
Waayo, Glitz iyo Glam Sister(hadiyado Christmas walaashood):
9. Sminke Professional caday Set
Haddii aad SIS cajiib ah ayaa la soo baxeen, waayo, habeenkii oo xiiso-ka buuxiyey a on magaalada, ama socda oo ku saabsan nolol maalmeedka, iyadu mar walba uu doonayo in uu fiirin doonaan iyada ugu fiican. Oo waxba hayn doonaa iyada raadinaya heer sare ah sida Tools beduliyum’ xirfadeed Taxanaha Maestro set burush qurxiyo. set waxaa ka mid ah 12 burush bakteeriyada oo ay ku jiraan aasaas, highlighter, ceebna iyo burush isha qurxiyo. buraash kasta wuxuu leeyahay ferrule a plated nickel iyo xarrago xamili alwaax madow. The indha tiray iman duudduubnaa ilaa kiis qummanayn koley burush dheeraad ah ay dhacdo in walaashaa doorto in uu ku daro iyada ururinta dambe.
Sminke Professional caday Set
10. Maqaarka System Cleansing
Sidaas walaashaa waa artist a qurxiyo run, laakiin artist kasta oo uu u baahan yahay wax gaar ah ka mid ah: shiraac ah oo nadiif ah si rinjiga gal. Tani nidaamka maqaarka daahirintiisa Philips PureRadiance isticmaalaa digir Sonic in laga takhaluso boodh, wasakh iyo qurxiyo hadhay halka hagaajinta wareegga. Qalabka wuxuu u yimaadaa in midabka miro ah iyo madaxdii burush dheeraad ah lagu dari kartaa nadiifisaan ah intan ka waxtar badan. Mid sanduuqa waa mid PureRadiance qalab daahirintiisa la batari lithium ra'iyi, mid madax burush oo joogto ah iyo mid madax burush exfoliation. Your walaashiis noqon doonaa mid weligiis waara Mahadiya markay aad ka helo this hadiyad weyn, and she will never have to deal with sticky dried-on makeup again.this is one of the favorite for hadiyado Christmas walaashood
Maqaarka System Cleansing
Marka ay timaado in walaasheed aad u gaar ah oo la jecel yahay, aad rabto in aad ka helo wax dhab ah oo gaar ah. Waxaan rajeynayaa, liiskan ku siin doonaa qaar ka mid ah fikrado weyn oo ku saabsan waxa si aad u hesho walaashaa for Christmas sida gaarka ah iyada oo aad maalin kasta ka dhigaysa.
Filed Under: blog, Gifts Christmas Tagged With: best gift for sister, best sister gifts, birthday gift ideas for sister, birthday gifts for sister, birthday present for sister, christmas gift ideas for sister, Christmas gifts for sister, christmas ideas for sisters, christmas present ideas for sister, christmas presents for sister, diy gifts for sister, funny sister gifts, gift ideas for sister, gift ideas for sister in law, gift ideas sister, gifts for a sister, gifts for my sister, gifts for sister, gifts for sister birthday, gifts for sister from brother, gifts for sister in law, gifts for your sister, good gifts for sisters, present ideas for sister, presents for sisters, sentimental gifts for sisters, sister birthday gifts, sister christmas gifts, sister gift ideas, sister gifts, sister gifts for christmas, sister in law gifts, sister jewelry, sister presents, special gifts for sisters, special sister gifts, unique gifts for sister